P90X3 सौदा:6मुफ्त बोनस उपहार + मुफ्त शिपिंग अपग्रेड
घर » Beachbody » P90X3 सौदा:6मुफ्त बोनस उपहार + मुफ्त शिपिंग अपग्रेड गर्नुहोस
P90X3 सौदा:6मुफ्त बोनस उपहार + मुफ्त शिपिंग अपग्रेड गर्नुहोस
बीचको P90X3 विशेष प्रस्ताव
Get6FREE बोनस गिफ्ट + एक मुफ्त अपग्रेड यस एक्सप्रेस शिपिंग संग एक्सप्रेस शिपिंग मा डील
P90X3 अब किन्नुहोस - खरिदका साथ निःशुल्क उपहारहरू!
P90X3 को बारेमा:
P90X3 ले एक अभूतपूर्व विविधतालाई एकजुट गर्दछ जुन प्रत्येक मांसपेशीले हरेक दिन पूर्ण-थ्रोटटल तीव्रताको आधा घण्टाको लागि चुनौती दिएको छ, जसमा अत्यधिक संरचित, प्लेटस्ट-स्टस्टिङ कार्यक्रम भएको छ जुन सबै अन्य व्यायाम कार्यक्रमहरू माटोमा छोड्छन्। P90X3 एक पूर्ण कसरत हो जुन तपाईं आधा समयमा प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ।
क्या कामआउट तपाईं P90X3 सँग भेट्नुहुन्छ?
P90X3 समावेश गर्दछ 16 तीव्र आधा घण्टा कार्यआउट
Workouts मा छ मांसपेशियों को निर्माण प्रतिरोध workouts, तीन पार प्रशिक्षण शक्ति workouts, चार कोर लचीलापन
र ब्यालेन्स कसरत, र तीन पार प्रशिक्षण workouts
बोनस उपहारहरू के हो?
बोनस उपहार #1: फिटनेस गाइड - यस P90X3 फिटनेस गाइड यस चरम फिटनेस कार्यक्रम को सबै भन्दा बाहिर निकालने को लागि चरण-दर-चरण गाइड हो।
बोनस उपहार #2: पोषण गाइड - यो गाइडले खाने को लागी एक सरल दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ। यस पोषण गाइडको साथ, तपाईं फिटनेस लक्ष्यहरू मेल खाने अनुकूलन गर्न र यसलाई अनुकूल गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईलाई शरीर चाहनु मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको छ - र यो बाटो राख्नुहोस्।
बोनस उपहार #3: P90X3 कसरत क्यालेन्डर - टोनीले तपाईंलाई प्रत्येक दिन को कसरत प्रदान गर्दछ, यसैले तपाइँ सबै के गर्न चाहन्छ र यसलाई तपाइँको उत्तम दिन दिनुहोस्।
बोनस उपहार #4: "कसरी गति" DVD - यो बोनस डीभिडी सजिलो हो। यो एक P90X3 परिचय हो जसले तपाईंलाई सबैभन्दा छिटो समय मा तपाईको उत्तम परिणाम कसरी प्राप्त गर्न सक्दछ।
बोनस उपहार #5: प्रो-ग्रेड प्रतिरोध बैंड - यो एक प्रीमियम प्रतिरोध हो जसले तपाईंलाई मांसपेशीलाई सही प्रतिरोध प्रदान गरेर चुनौती दिएको छ।
बोनस उपहार #6: 24 /7अनलाइन समर्थन - अनौपचारिक 'राउन्ड-घडीको पहुँचको साथ Beachbody फिटनेस विशेषज्ञहरु र P90X3 साथी सहयोगको साथ उत्प्रेरित रहनुहोस्।
तपाईं $ 90 (+ $3शिपिंग र हैंडलिंग) को3मासिक भुक्तानीको लागि P39.95X19.95 खरीद गर्न सक्नुहुन्छ वा चेकआउटमा तपाइँ एक भुक्तानी विकल्प चयन गर्न सक्नुहुनेछ।
यस P90X3 डीलमा थप जानकारीको लागि तल लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्
अक्टोबर 17, 2016 व्यवस्थापक Beachbody कुनै टिप्पणी छैन
दैनिक जर्नल डील: 30 डे नि: शुल्क परीक्षण प्लस तपाईंको 10 1 महिनामा 3% बचत गर्नुहोस्।
क्षितिज फिटनेस 2016 ब्ल्याक शुक्रबार बिक्री